တိတ်ဆိတ်တဲ့ ထမင်းဝိုင်းတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ နည်းလမ်း ၆ ခု – Gentleman Magazine
အိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေး ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် နှစ်ယောက်တူတူ ညစာစားရတာ ရိုမန်တစ် ဆန်ပါတယ်။ အနည်းဆုံး ရိုမန်တစ်မဆန်ရင်တောင် သင့်ချစ်သူနဲ့ တူတူရှိနေရလို့ စိတ်ကျေနပ်ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အေးဆေးခြင်းဟာ တိတ်ဆိတ်ခြင်းအဖြစ် ပြောင်းသွားခဲ့ရင်ရော??
တကယ်လို့ ညစာစားပွဲမှာ တိတ်ဆိတ်နေတာဟာ ဒေါသ၊ ရန်ဖြစ်မှုကနေ စလာတာဆိုရင်တော့ အဲဒါတွေက Pro တွေနဲ့ ဆွေးနွေးပြီး အကြံဉာဏ် ယူရမှာပါ။ အဲလိုမဟုတ်ပဲ ဘာပြောရမှန်း မသိရုံလောက်လေး ဆိုရင်တော့ စကားစဖို့ နည်းလမ်း ၆ သွယ်ကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
၁. “ဒီနေ့ အဆင်ပြေလား” ဆိုတာတွေ မပြောပါနဲ့တော့
ပြောပြီးသားတွေကိုပဲ ထပ်ပြောနေရင် စကားဝိုင်းက ပျင်းစရာ ကောင်းသွားတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ.. ဥပမာ လူသစ်တွေနဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်ရတဲ့ အကြောင်း၊ စိတ်ဖိစီးစရာတွေ အကြောင်းကို မေးခဲ့ရင်တော့ သင်တို့နှစ်ယောက်လုံး စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရေးကြီးတာတွေကို ပြောမိတာပါ။ အရေးကြီးဆုံးက သေချာ နားထောင်ပြီး စုံစမ်းတတ်ဖို့ပါ။ တော်တော်များများက အဲဒိလိုလုပ်ဖို့ ပျင်းတတ်ကြပါတယ်။
၂. သီချင်းလေး ဖွင့်ထားပါ
ဂီတဟာ သင့်ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို ပိုကောင်းစေပြီး သင့်ကို ပိုပြီး ဖော်ရွေစေပါတယ်။ စိတ်ခံစားမှု ဆက်သွယ်တဲ့ ဦးနှောက် အပိုင်းကိုလဲ လှုံ့ဆော်ပေးပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သင်တို့နှစ်ယောက်လုံးကြိုက်တဲ့ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်လောက် ဖွင့်ထားလိုက်ပါ။
၃. “ငါ့ကြောင့်လား” ဆိုတာ မေးပါ
ထမင်းဝိုင်းမှာ တိတ်ဆိတ်နေရင် သင့် ပါတနာ တစ်ခုခုကို စိတ်တိ်ုနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင့်ကို စိတ်ဆိုးတာလို့ ချက်ချင်း အတွေးနဲ့ မယူဆပါနဲ့။ သူမကို ဗြောင် ဖွင့်မေးလိုက်ပါ။ တစ်ခါတစ်လေမှာ မိန်းမတွေက အဲလို အမေးကို စောင့်တတ်ကြပါတယ်။ သင်က သူမကို ဂရုတစိုက်ရှိလို့ ပိုပြီးလဲ အမှတ်ရစေပါတယ်။ မမေးခဲ့ရင် သူမလဲ စိတ်မချမ်းသာ၊ သင်လဲ သင့်ကိုယ်သင် အပြစ်တင်မိနေမှာပါ။
၄. ဖုန်းတွေ အနားမထားပါနဲ့
Silent လုပ်ရုံမကပဲ မျက်စိအောက်မှာကို မထားပါနဲ့။ ဖုန်းတစ်လုံးကို မြင်နေရတာတောင် သင့်ကို သင့် ကြင်ဖက်နဲ့ ဝေးသွားသလို ခံစားမိစေပါတယ်။ အရေးကြီး စကားဝိုင်းတွေမှာ ဖုန်းကို အနားမှာ ထားတာက စကားဝိုင်း အရည်အသွေး၊ ယုံကြည်မှု၊ စိတ်ဆက်နွယ်မှု ၃၅ ရာနှုန်းလောက် ကျသွားစေပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Social Site တွေကို Check နေရလို့ သင်တို့နှစ်ယောက်ကြား ပိုပြီး ဝေးကွာသွားပါတယ်။
၅. ပြောစရာ မရှိရင် မရှိကြောင်း ပြောပါ
အဲဒါက ဗြောင်ကျလွန်းပေမယ့် “ကိုကတော့ ပြောစရာ မတွေ့တော့ဘူး။ ချစ်ရော?? ” လို့ မေးလိုက်တာဟာ ဆက်တိုက်ဆက်တိုက် စကားဝိုင်းတစ်ခုဆီ ဦးတည်သွားပါတယ်။ တဲ့။
၆. စားပွဲဝိုင်းကို တစ်ခုခု ယူလာပါ
တစ်ချို့ တိတ်ဆိတ်မှုတွေဟာ စုံတွဲတွေမှာ တစ်ယောက်က တစ်ယောက်ကို သူ့ရဲ့ အခက်အခဲတွေ အကြောင်း ပြောမပြချင်တာကနေ စလာတာပါ။ သင်ရော သူမကို သင့် ခက်ခဲပင်ပန်းတဲ့ တစ်နေ့တာအကြောင်း ပြောချင်ပါသလား?? မပြောချင်ရင် သူမလဲ တူတူပါပဲ။
သူမကို ပင်ပန်းတာကနေရပ်ပြီး အံ့ဩသွားစေမယ့် အရာ တစ်ခုခု ယူလာပါ။ အရုပ်ကလေး၊ ကြောင်လေး၊ ခွေးလေး၊ တစ်ခုခုပေါ့။ စိတ်ဓာတ်ခွန်အား တိုးစေမယ့် စာလေးတွေလဲ ရပါတယ်။ ဥပမာ ဒီ Article ပေါ့။ ဖုန်း ယူမလာဖို့ပဲ သတိပြုပါ။
တိတျဆိတျတဲ့ ထမငျးဝိုငျးတှကေို ရှောငျရှားဖို့ နညျးလမျး ၆ ခု
အိမျမှာ အေးအေးဆေးဆေး ငွိမျငွိမျသကျသကျ နှဈယောကျတူတူ ညစာစားရတာ ရိုမနျတဈ ဆနျပါတယျ။ အနညျးဆုံး ရိုမနျတဈမဆနျရငျတောငျ သငျ့ခဈြသူနဲ့ တူတူရှိနရေလို့ စိတျကနြေပျရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ အေးဆေးခွငျးဟာ တိတျဆိတျခွငျးအဖွဈ ပွောငျးသှားခဲ့ရငျရော??
တကယျလို့ ညစာစားပှဲမှာ တိတျဆိတျနတောဟာ ဒေါသ၊ ရနျဖွဈမှုကနေ စလာတာဆိုရငျတော့ အဲဒါတှကေ Pro တှနေဲ့ ဆှေးနှေးပွီး အကွံဉာဏျ ယူရမှာပါ။ အဲလိုမဟုတျပဲ ဘာပွောရမှနျး မသိရုံလောကျလေး ဆိုရငျတော့ စကားစဖို့ နညျးလမျး ၆ သှယျကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
၁. “ဒီနေ့ အဆငျပွလေား” ဆိုတာတှေ မပွောပါနဲ့တော့
ပွောပွီးသားတှကေိုပဲ ထပျပွောနရေငျ စကားဝိုငျးက ပငျြးစရာ ကောငျးသှားတတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူ့ရဲ့ ခံစားခကျြတှေ.. ဥပမာ လူသဈတှနေဲ့ အလုပျတှဲလုပျရတဲ့ အကွောငျး၊ စိတျဖိစီးစရာတှေ အကွောငျးကို မေးခဲ့ရငျတော့ သငျတို့နှဈယောကျလုံး စိတျဝငျစားတဲ့ အရေးကွီးတာတှကေို ပွောမိတာပါ။ အရေးကွီးဆုံးက သခြော နားထောငျပွီး စုံစမျးတတျဖို့ပါ။ တျောတျောမြားမြားက အဲဒိလိုလုပျဖို့ ပငျြးတတျကွပါတယျ။
၂. သီခငျြးလေး ဖှငျ့ထားပါ
ဂီတဟာ သငျ့ရဲ့ စိတျခံစားခကျြကို ပိုကောငျးစပွေီး သငျ့ကို ပိုပွီး ဖျောရှစေပေါတယျ။ စိတျခံစားမှု ဆကျသှယျတဲ့ ဦးနှောကျ အပိုငျးကိုလဲ လှုံ့ဆျောပေးပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျတို့နှဈယောကျလုံးကွိုကျတဲ့ သီခငျြးလေး တဈပုဒျလောကျ ဖှငျ့ထားလိုကျပါ။
၃. “ငါ့ကွောငျ့လား” ဆိုတာ မေးပါ
ထမငျးဝိုငျးမှာ တိတျဆိတျနရေငျ သငျ့ ပါတနာ တဈခုခုကို စိတျတျိုနတော ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သငျ့ကို စိတျဆိုးတာလို့ ခကျြခငျြး အတှေးနဲ့ မယူဆပါနဲ့။ သူမကို ဗွောငျ ဖှငျ့မေးလိုကျပါ။ တဈခါတဈလမှော မိနျးမတှကေ အဲလို အမေးကို စောငျ့တတျကွပါတယျ။ သငျက သူမကို ဂရုတစိုကျရှိလို့ ပိုပွီးလဲ အမှတျရစပေါတယျ။ မမေးခဲ့ရငျ သူမလဲ စိတျမခမျြးသာ၊ သငျလဲ သငျ့ကိုယျသငျ အပွဈတငျမိနမှောပါ။
၄. ဖုနျးတှေ အနားမထားပါနဲ့
Silent လုပျရုံမကပဲ မကျြစိအောကျမှာကို မထားပါနဲ့။ ဖုနျးတဈလုံးကို မွငျနရေတာတောငျ သငျ့ကို သငျ့ ကွငျဖကျနဲ့ ဝေးသှားသလို ခံစားမိစပေါတယျ။ အရေးကွီး စကားဝိုငျးတှမှော ဖုနျးကို အနားမှာ ထားတာက စကားဝိုငျး အရညျအသှေး၊ ယုံကွညျမှု၊ စိတျဆကျနှယျမှု ၃၅ ရာနှုနျးလောကျ ကသြှားစပေါတယျ။ သငျ့ရဲ့ Social Site တှကေို Check နရေလို့ သငျတို့နှဈယောကျကွား ပိုပွီး ဝေးကှာသှားပါတယျ။
၅. ပွောစရာ မရှိရငျ မရှိကွောငျး ပွောပါ
အဲဒါက ဗွောငျကလြှနျးပမေယျ့ “ကိုကတော့ ပွောစရာ မတှတေ့ော့ဘူး။ ခဈြရော?? ” လို့ မေးလိုကျတာဟာ ဆကျတိုကျဆကျတိုကျ စကားဝိုငျးတဈခုဆီ ဦးတညျသှားပါတယျ။ တဲ့။
၆. စားပှဲဝိုငျးကို တဈခုခု ယူလာပါ
တဈခြို့ တိတျဆိတျမှုတှဟော စုံတှဲတှမှော တဈယောကျက တဈယောကျကို သူ့ရဲ့ အခကျအခဲတှေ အကွောငျး ပွောမပွခငျြတာကနေ စလာတာပါ။ သငျရော သူမကို သငျ့ ခကျခဲပငျပနျးတဲ့ တဈနတေ့ာအကွောငျး ပွောခငျြပါသလား?? မပွောခငျြရငျ သူမလဲ တူတူပါပဲ။
သူမကို ပငျပနျးတာကနရေပျပွီး အံ့ဩသှားစမေယျ့ အရာ တဈခုခု ယူလာပါ။ အရုပျကလေး၊ ကွောငျလေး၊ ခှေးလေး၊ တဈခုခုပေါ့။ စိတျဓာတျခှနျအား တိုးစမေယျ့ စာလေးတှလေဲ ရပါတယျ။ ဥပမာ ဒီ Article ပေါ့။ ဖုနျး ယူမလာဖို့ပဲ သတိပွုပါ။
Previous: စုံတွဲတွေအကြားရှိသင့်တဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့် (၉)ခု
Next: ဒုတိယအချစ်က အချစ်ဦးထက် ပိုကောင်းရသည့် အကြောင်းရင်း (၁၀)